လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ONDOY(96W) update | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ONDOY(96W) update
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ONDOY(96W) ဟာ တစ်နာရီကို ၁၅ မိုင်နှုန်းနဲ့ အနောက်-အနောက်တောင်ဘက်ကို ဆက်လက်ရွေ့လျားနေပါတယ်။ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းကို ဖိလစ်ပိုင်မိုးလေဝသဌာနက ONDOY လို့ အမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Bicol ဒေသကို ဦးတည်ရွေ့လျားလျက်ရှိတဲ့ အဲဒီ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းဟာ အဆိုပါဒေသမှာ လာမဲ့ တစ်ရက်အတွင်း မိုးရေချိန် 300mm (၁၁ လက်မ ကျော်) ရွာသွန်းနိုင်လို့ Bayon နဲ့ Bulusan မီးတောင် ဆင်ခြေလျောများမှာ နေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့ မြေပြိုမှုအန္တရာယ်နဲ့ ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အကြောင်း သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ မီးတောင်ရွံ့ရည်တွေစုဝေးစီးကျလာမဲ့ အန္တရာယ်ကို ဒီကနေ့ကစပြီး ကြုံတွေ့ရဘွယ်ရှိကြောင်းလဲ အဲဒီသတိပေးချက်မှာ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အထက်ပါ မီးတောင်ဆင်ခြေလျောများမှာ နေထိုင်ကြသူများအပြင် အနိမ့်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြသူတွေ အနေနဲ့လဲ ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေ အချိန်မရွေး ဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့် သတိဝီရိယနဲ့ နေထိုင်ကြဖို့ သတိပေးထားပါတယ်။
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ONDOY ရဲ့ အခြေအနေကို Typhoon 2000 ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်မှာ အခုလိုဖေါ်ပြပေးထားပါတယ်။
Location of Center: 13.9 N Lat 127.2 E Lon
Posted in Education, Weather Alert, Weather News. Tags: weather. LeaveaComment »
« Tsunami Information Bulletin
အားပျော့နေတဲ့လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ONDOY(update) »